Biyaha tijaabada ah (58-22-0) hplc = 99% | AASraw budo tijaabo ah
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada ah ee testosterone / Budo tijaabo ah
2.00 ka mid ah 5 ku saleysan 7 ratings macaamiisha
SKU: 58-22-0. Categories: Taxanaha budada ah ee testosterone, Anterolics steroids
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Testosterone (58-22-0), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dib u eegida (7)
Fiidiyowga tijaabada ee testosterone
Asaasiga testosterone aasaasiga ah characters
Name: Daawada budada ah
Dhibcaha Biyaha: 153-157 ° C
Isticmaalka budada loo yaqaan 'testosterone' ee wareegga steroids
Waxaa jira magacyo caan ah, sida Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Stridi, Sawir, Delatestryl, Androderm, oo sidoo kale ugu yeeray "Test," ama "Base Test".
Isticmaalka budada loo yaqaan 'testosterone'
Budada tijaabada ayaa badiyaa loo isticmaalaa sida saliid lagu muday muruqa. Suuqa, waxaa sida caadiga ah 100mg / ml, 200mg / ml. Cirbadda waxaa la siiyaa inta badan 2 kasta oo usbuuca 4.
Digniin ku saabsan budada testosterone
Waa inaadan qaadin daawada budada ah ee testosterone haddii aad xasaasiyad ku leedahay, ama haddii aad leedahay:
kansarka qanjirka 'prostate';
xaalad wadnaha oo daran;
Cudurka beerka ee daran;
cudurka kelyaha daran; ama.
haddii aad uur leedahay ama aad uur leedahay.
Xadgudub kasta oo ka yimaada budada testosterone wuxuu keeni karaa waxyeelo waxyeelo leh, sida naasaha waaweyn, kuwa yar yar, dhalmo yarida, cadaadiska sare ee dhiigga, wadnaha, stroke, cudur beerka, dhibaatooyinka koritaanka lafaha, khamriga, iyo waxyeelada maskaxda sida gardarrada iyo rabshadaha.
Waxyaabahaan waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah steroids ugu faa'iido badan ee jirka.
Faa'iidooyinka waxaa ku jira
Dhimista hoos u dhaca murqaha glycogen inta lagu jiro jimicsiga
Horumarinta cidhiidhi iyo xoojinta miskaha
Ilaalinta murqaha iyo tayada
Hagaajinta cufka lafaha iyo xoogga
Ilaalinta libido iyo dhirta
(xadgudubka dheeraadka ah waxaa laga yaabaa in uu keeno qalalaasaha foosha ee xanuun leh, iyo fara-xumeyn)
Kordhay heerka caadiga ah
Kordhay tirada unugyada dhiigga ee cas iyo mugga dhiigga
Kordhinta dheecaanka borotiinka murqaha oo keena kororka murqaha.
Testosterone Budada caanaha
Suuq-gare 'Testosterone Purchase Marketing'
Sida loo soo iibsado budada Testosterone ee AASraw
AASraw waxay bixisay nadiifin 98% Daawad buduun ah oo tijaabi ah oo loogu talagalay jirka jirka ama sheyaalka dhulka hoostiisa ee isticmaalka duritaanka.
Testosterone Kalluunta Rootiga ah:
Baaritaan baaris ah oo la yiraahdo cypionate caano: Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato steroids cajiib ah !!!
7 dib loogu talagalay Daawada budada ah
Sidii aad u akhrisatay fikradayda! Waxaad u muuqataa inaad fahamto arrintan, sida
waxaad ku qortay buugga e eey ama wax kale. taasi waa cajiib cajiib ah.
Akhriska ugu fiican. Xaqiiqdii waan soo laaban doonaa.
miyaad u diri kartaa viagra uk
Coral - 11 / 23 / 2018
Waxaa la ii sheegay in aan qaadan karno viagra iyada oo aan dhakhtar qorin
Yaa! Doorasho fiican oo midabyo leh! Bloggu wuxuu u egyahay sida tan hore oo kale, midabyo isku mid ah, laakiin waxaad qori kartaa qoraallo ku saabsan Sawirada Testosterone, Waa mawdu gebi ahaanba ka duwan aniga laakiin waxay leedahay si qurux badan oo isku mid ah
qaabeynta iyo naqshadeynta. waan jeclahay
Ma jeclaan lahayd inaad ogeysiiso shirkadda martigelinta ee aad la shaqeyneyso?
Waxaan boggagaaga ku dhexjiray 3 shabakadaha internetka kala duwan iyo aniga
waa in ay dhahaan blogkan wax badan oo dhakhso badan u dhaqsa kadibna inta badan waan kulmay.
Miyaad soo jeedin kartaa bixiyaha internetka ee internetka ku fiican ee qiimaha macquul ah?
Waad ku mahadsan tahay, waan ku qanacsanahay!
Converter - 11 / 16 / 2018
Taasi waa markii ugu horeysay ee aan galo boggaaga bogga, malee waxa?
Waxaan la yaabay cilmi-baarista aad samaysay si loo abuuro tan gaar ah oo aan caadi ahayn.
Waxqabadka cajiibka ah!
waa maqaal cajiib ah.
Waan akhriyay cutubkan si buuxda oo ku saabsan isbarbardhigga ugu kulul
iyo tikniyooyin hore,
Marar badan ayaan ku soo laaban doonaa
PolypodiuM saaro budada
Noopept (GVS-111) budada
Daawada Eplerenone (107724-20-9)